၃.၂ တမန်တော်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာခြင်းနှင့် အစ္စလာမ် သို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်း
၅ အစ္စလာမ် ပြန့်ပွားခဲ့ခြင်း နှင့် အစ္စလာမ့်အုပ်ချုပ်ရေးများ
اسلام در جهان مدرن و امروزی سنی شیعی اباضی
အရဗ် မျိုးနွယ်စုများ ~[ပြင်ဆင်ရန်]
တမန်တော်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာခြင်းနှင့် အစ္စလာမ် သို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
အဘွလ်ကာစင်မ်မိုဟမ္မဒိဗ်နေအဗ်ဒွလ္လာဟိဗ်နေအဗ်ဒွလ်မွတ်သွလိဗ် ဘင်န်ဟာရှင်မ် (ဆွ)(၆၃၂-၅၇၀) သည် အစ္စလာမ် သာသနာတော်ကြီးကိုအုပ်မြစ်ချခဲ့သောတမန်တော်ဖြစ်ပြီးအရှင့်၏ တမန်တော်များအကြားအသာလွန် ဆုံး၊ အမြင့်မြတ်ဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးပွင့်တော်မူသောတမန်တော်ဖြစ်သည်။ မွတ်စလင်မ်တို့သည်မိုဟမ္မဒ်သခင်(ဆွ)ကို ကောင်းကင်ကျ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် ကိုယူဆောင်လာသူ စစ်မှန်သောသာသနာများဖြစ်သည့်တစ်ပါးတည်းအရှင် ကိုသာကိုးကွယ်သော (အာဒမ် ၊ အိဗ်ရာဟိမ် ၊ မူစာ ၊ နူးဟ် ၊ အီစာ [ခရစ်တော်] နှင့်ကျန်တမန်တော်အပေါင်း၏ သာသနာကိုအတိုးအလျှော့မရှိ ပြန်လည်ဆောင်ကျဉ်းလာသူအဖြစ်ယုံကြည်ထားကြသည်။ ထိုနည်းတူစွာတမန် တော်မြတ်ကြီး(ဆွ) သည် နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး အတွေးအခေါ်ပညာရှင် အဟောအပြောကြွယ်သူ ဥပဒေပြုသူ ငြိမ်း ချမ်းရေးလိုလားသူ စစ်အာဏာရှိသူ မွတ်စလင်မ် အပေါင်းနှင့်အခြားသော မဇ်ဟဘ် အသီးသီးရှိလူများအား အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်၏ပညတ်တော်များကိုလမ်းညွှန်ပြသ သင်ကြားပေးသူလည်းဖြစ်သည်။ .တမန်တော်မြတ်(ဆွ) သည် ဝဟီ မကျမီသို့မဟုတ်တမန်တော်အဖြစ်ကြေညာမှုမပြုမီအရင်မိမိဘိုးဘေးများ၏သာသနာဖြစ်သော ဒီးနေဟ နီးဖှ် တစ်နည်းဆိုရသော်တစ်ပါးတည်းအရှင်ကိုသာကိုးကွယ်သည့် တမန်တော်အိဗ်ရာဟီမ်(အစ) ၏သာသနာတွင် ရှိခဲ့သည်။ .
ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ) အားသက်တော် ၄၀ တွင်တမန်တော်အဖြစ်သတ်မှတ်ကြေညာခဲ့သည်။  သို့ရာတွင်အမျိုးသား များထဲမှပထမဆုံး အီမါန်သက်ဝင်ယုံကြည်ခဲ့သူမှာ အလီယိဗ်နေအဘီသွာလိဗ် ဖြစ်ပြီး  အမျိုးသမီးများထဲမှပထမ ဆုံးသက်ဝင်ယုံကြည်ခဲ့သူမှာ ခဒီဂျာ သခင်မဖြစ်သည်။. တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ) သည် မဗ်အူးစ် ဖြစ်ပြီးသုံးနှစ်အ ထိမိမိ၏ ဒါအ်ဝသ် (အစ္စလာမ် သို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်း) အားထင်ထင်ပေါ်ပေါ်မဆောင်ရွက်ခဲ့ပါ ၊ သုံးနှစ်ပြည့်ပြီးနောက်အ ရှင်မြတ်၏ ဝဟီ ဗျာဒိတ်တော်အရထင်ပေါ်စွာ အစ္စလာမ် သို့ ဒါအ်ဝသ် လုပ်ခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံး ဗနီဟာရှင်မ် မှ မိမိ၏အမျိုးအဆွေများဖြစ်သောဦးရီးတော်များညီအစ်ကိုဝမ်းကွဲများကိုထင်ပေါ်စွာ ဒါအ်ဝသ် ပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဆဖှာ တောင်ပေါ်သို့သွားရောက်ပြီး ကိုရိုရှ် မျိုးနွယ်တစ်စုလုံးအားထင်ပေါ်စွာ အစ္စလာမ် သို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ .
ပထမပိုင်းတွင် ကိုရိုရှ် ခေါင်းဆောင်များက ကိုယ်တော်မြတ် (ဆွ) ၏ ဖိတ်ခေါ်မှုကိုထင်သလောက်အရေးမလုပ်ခဲ့ ကြပါ ၊ သို့သော်တမန်တော်မြတ်(ဆွ) သည်ရုပ်တုများနှင့်ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုလာသောအခါ သခင့်အားရန်လိုကြ လေသည်။ ၎င်းတို့သည်ပထမဆုံးဆန့်ကျင်မှုအနေဖြင့် အဘူသွာလိဗ် မှတဆင့် မိုဟမ္မဒ်သခင်၏ အစ္စလာမ် သို့ ဖိတ်ခေါ်ခြင်းအားရပ်တန့်ခိုင်းလေသည်။ အဘူသွာလိဗ် သည်ထိုအကြောင်းရင်းကို ကိုယ်တော့်အားတင်ပြရာကိုယ် တော်သည်ငြင်းပယ်ခဲ့၏။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာထိုကဲ့သို့တောင်းဆိုမှုများကို ကွဖှ်ဖှားရေကိုရိုရှ် ကပြုလုပ်ခဲ့လေသည် နောက်ဆုံးကိုယ်တော်မြတ်သည်ဤလမ်း၌ခိုင်မာသောသန္နိဋ္ဌာန်ဖြင့် ရှေ့ဆက်မည့်အကြောင်း အဘူသွာလိဗ် အား ဖွင့်ဟပြောဆိုရာအဘူသွာလိဗ် သည်လည်းမားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ကာကွယ်ခြင်းဖြင့်လက်တွေ့ကျကျအဖြေပေး ကူညီဆောင်မခဲ့သည်။ .
ကိုရိုရှ် ခေါင်းဆောင်များသည် အဘူသွာလိဗ် မှတဆင့်တောင်းဆိုမှုများ အကျိုးမထူးကြောင်းတွေ့မြင်သောအခါ မဒီနာ မြို့ရှိ ယဟူဒီ များအားအကူအညီတောင်းကြပြန်သည်၊ ယဟူဒီ ပညာရှင်များကမေးခွန်းသုံးခုကို မိုဟမ္မဒ် ထံ မှမေးမြန်းခိုင်း၏ အကယ်၍အဖြေပေးနိုင်ခဲ့သော်သူ၏ တမန်တော် ဖြစ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးသံသယဖြစ်စရာအ ကြောင်းမရှိဟုဆိုကြလေသည်။ ကိုရိုရှ် မှအကြီးအကဲများလည်း မကာ မြို့သို့ပြန်လာပြီးကိုယ်တော်မြတ်ထံဤသ တင်းကိုပေးသောအခါ ကိုယ်တော်မြတ်သည်လည်းအဖြေပေးမည့်အကြောင်းကတိပေးလိုက်ပြီး ကိုရိုရှ် အကြီးအ ကဲများ ၎င်းတို့နိုင်ပြီဟုခံစားနေချိန် ၁၅ ရက်မြောက်နေ့တွင်အဖြေပေးခဲ့သည်။ ဂျိဘ်ရအီလ် ကလည်းအရှင်မြတ်ကို သာ သဝကွလ် ပြုလုပ်ရန်တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။. တစ်ဖက်မှလည်း မွတ်စလင်မ် အရေအတွက်များပြားလာသည်နှင့်အမျှရုပ်တုကိုးကွယ်သော ကိုရိုရှ် တို့သည်လည်း မိမိတို့၏ရက်စက်ရုတ်မာမှုများကိုအရှိန်မြှင့်တင်ခဲ့ကြသည် ၊ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ရိုက်နှက်ခြင်းများပြုခဲ့ရာ ထိုရက်စက် မှုများ၌ စိုမိုင်ယာ သခင်မသည်အသတ်ခံရပြီး အစ္စလာမ့် လမ်းတွင်ပထမဆုံး ရှဟီးဒ် ဖြစ်ခဲ့သည့်အမျိုးသမီးဖြစ် သည်။ တမန်တော်မြတ်(ဆွ) ၏ အဆွ်ဟားဘ် များကိုလည်းညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့ကြပြီး ဘေလားလ် အမားရ် ယာစီရ် ဆိုသည့် အဆွ်ဟားဘ် များအားအလွန်ပြင်းထန်သောနှိပ်စက်မှုများနှင့်ရက်စက်ခဲ့ကြသည်။ .
မွတ်စလင်မ် များ ဟဘရှဲ သို့ ဟိဂျ်ရသ် လုပ်ခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
ကိုရိုရှ် တို့၏ညှင်းပန်းမှုရန်မှဝေးပြီး တစ်ပါးတည်းအရှင်ကိုးကွယ်ရေးကြွေးကျော်မှုများကို အေးချမ်းစွာဆောင်ရွက် နိုင်ရေးအတွက် မွတ်စလင်မ် အုပ်စုသည် မကာ မြို့အားစွန့်ခွါရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ လုပ်ငန်းဆောင်တာ သားသမီး ဆွေမျိုးများကိုလည်းထားရစ်ခဲ့ရမည်၊ ဘယ်ကိုသွား၍ဘာလုပ်ရမည်မှန်းမသိသည့်အခြေအနေတစ်ခုက လည်းတုံလှုပ်ချောက်ချားနေစေ၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အရဗ် ကျွန်းဆွယ်တစ်ခုလုံးသည်ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်း များနှင့်ဖုံလွှမ်းလျက် ရှိနေပြီး သောင်ဟီးဒ် ၏အသံကိုကြွေးကျော်ဖို့ရာနေရာမရှိသလောက်ဖြစ်နေသည်။ သို့ပါ၍ထို အကြောင်းအရာကို တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ) ထံလျှောက်ထားတိုင်ပင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုတမန်တော်၏ သာသနာသည်ကား «إن أرضی واسعه فایّای فاعبدون» ( အလ္လာဟ် အရှင်မြတ်၏ပထဝီမြေကြီးသည်ကျယ်ဝန်း၏အရှင် မြတ်အားခဝပ်ကိုးကွယ်နိုင်မည့်နေရာဒေသအားရွေးချယ်ပြီးနေထိုင်ဘဝလုပ်ရပေမည်။ ) ဆိုသည့်အပေါ်အခြေခံ နေသောကြောင့်ဖြစ်၏။
ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ) နှင့် မွတ်စလင်မ် များ မဒီနာ သို့ ဟိဂျ်ရသ် လုပ်ခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
တမန်တော်မြတ်(ဆွ) ၏နောက်ပိုင်း ခလီဖှာ လေးဦးဖြစ်သည့် အဘူဘက်ရ်၊ အွမ်မရ်၊ အွတ်္စမါန်၊ အလီယိဗ်နေအ ဘီသွာလိဗ်(အစ) တို့အား ခွလ်ဖှာယေရာရှေဒီးန် ဟုခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းကြသည်။ စွန်နီ များကတမန်တော်မြတ်(ဆွ) သည်မိမိ၏နောက်ပိုင်းဆက်ခံမည့်သူအား မည်သူဖြစ်ကြောင်းသတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းမရှိဟုယုံကြည်ကြသည်။ ရှီအာ များ က တမန်တော်မြတ်(ဆွ)သည် အလ္လာဟ် အမိန့်ဖြင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာ အလီယိဗ်နေအဘီသွာလိဗ်(အစ) အားမိ မိ၏နောက် ခေလာဖှသ် ကိုဆက်ခံမည့်သူဖြစ်ကြောင်းကြေညာပေးခဲ့သည်။ ပမာအားဖြင့် ယောင်မွတ်ဒါးရ်-ဆွေမျိုး ရင်းချာများကိုသာစတင် ဒါအ်ဝသ် ပေးခဲ့သောနေ့- နှင့် ဂဒီးရေခွမ်-တမန်တော်မြတ်(ဆွ) နောက်ဆုံးဟဂျ်မှအပြန် အလီ(အစ)၏ဝေလာယသ်ကို ဟဂျ် လာရောက်သည့်မွတ်စလင်မ်များအကြားကြေညာပေးခဲ့သည်နေ့-နေရာ - တို့ တွင်လည်းကြေညာပေးခဲ့သည်။ တမန်တော်မြတ်(ဆွ) ဝဖှားသ် ဖြစ်ချိန် အဘူဘက်ရ် နှင့် အလီ(အစ) သည် ရစူလ် (ဆွ) အား ဂွစ်လ် ပေးရန်အလုပ်များနေချိန် အန်ဆွာရ် အမည်ရ အဆွ်ဟားဗ် တစ်စုကလည်း စကီဖှာ ဆိုသည့်နေ ရာတွင် ခလီဖှာ ရွေးချယ်ရန်အတွက်စုဝေးနေကြသည်။ ထိုသတင်း အဘူဘက်ရ် နားပေါက်သောအခါ အွမ်မရ် နှင့် အတူထိုနေရာသို့လိုက်သွားကြလေသည် ၊ အလီ(အစ) သည်ကား ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ) ကို ဂွစ်လ် ပေးရန်တစ်ဦး တည်းအလုပ်ရှုပ်ကျန်နေခဲ့ရသည်။ စကီဖှာ တွင်အငြင်းအခုံများဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံး အွမ်မရ် ၏စကားများအနိုင်ရကာ အဘူဘက်ရ် ကိုတင်မြှောက် ဘိုင်အသ် လုပ်လိုက်ကြသည်။ သာရီးခေသွဗရီ ၏သမိုင်းစာမျက်နှာများအရထိုနေ ရာ၌အုပ်စုတစ်စုက အလီ(အစ) ကိုထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ သမိုင်းဖော်ပြချက်များအရ ကိုယ်တော်မြတ်၏သမီးတော် ဖှာသွေမာ(စအ) သက်ရှိထင်ရှားရှိနေစဉ်ကာလတစ်လျှောက် အလီ(အစ) အား အဘူဘက်ရ် ကိုဘိုင်အသ်လုပ်ရန် စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ကြပေ။ အဘူဘက်ရ် လက်ထက်တွင် မွတ်စလင်မ် စစ်တပ်သည် တမန်တော်ဟုလိမ်ညာ ကြွေးကျော်သူတို့ကိုမနှိမ်နင်းနိုင်ခဲ့ပေ၊ဒုတိယ ခလီဖှာ အွမ်မရ် လက်ထက်၌ မွတ်စလင်မ် တို့သည် ရှားမ်-စီးရီးယား နှင့် အီရန် ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်။ ဒုတိယ ခလီဖှာ သည်အဖြစ်အပျက်တစ်ခု၌ ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရပြီးနောက် တတိယခလီဖှာ ရွေးချယ်ရန်အတွက် ၆ ဦးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။၎င်းအဖွဲ့တွင် အွတ်စမါန် ၊ အဗ်ဒွရ်ရဟ်မါန် နှင့် အလီ(အစ) တို့သုံးဦးကိုလည်းထည့်သွင်းခဲ့သည်။ အကယ်၍မဲညီနေခဲ့သော် အဗ်ဒွရ်ရဟ်မါန် ကထောက်ခံသူ သည် ခလီဖှာဖြစ်ရမည်ဟုလည်းဆိုပြန်သည် ၊ အဗ်ဒွရ်ရဟ်မါန် သည် အလီ(အစ) အားသတ်မှတ်ချက်သုံးချက်ဖြင့် ခေလာဖှသ် ကိုလက်ခံရန်အကြံပြုခဲ့သည် ၁- တမန်တော်၏စွန်နသ်အတိုင်းလိုက်နာရမည် ၂- ကုရ်အာန် အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည် ၃- ပထမ နှင့်ဒုတိယ ခလီဖှာ တို့၏အုပ်ချုပ်ပုံထုံးတမ်းအစဉ်အလာများအတိုင်းလိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမည်၊ အလီ(အစ) သည်အချက် ၃ ကိုလက်မခံခဲ့ပေ၊ အွတ်စမါန် ကလက်ခံခဲ့သဖြင့် ခေလာဖှသ် ကိုရ ရှိသွားခဲ့သည်။ ပထမ ဒုတိယ တတိယ ခလီဖှာ များခေတ်တစ်လျှောက်လုံး အလီ(အစ)သည်မည်သည့် အစ္စလာမ့် စစ်ပွဲများမှပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ အွတ်စမါန်၏ ခေလာဖှသ် သက်တမ်းသည် ၁၂ ခန့်နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး အလီ (အစ)၏ ခေလာဖှသ် ကာလမှာ ၅ နှစ်နီးပါးကြာမြင့်ခဲ့သည်။ .
အိုမိုင်ယာ တို့၏ခေလာဖှသ် ကာလ[ပြင်ဆင်ရန်]
အဘူစိုဖှီယါန် ၏သား မာအ်ဝေယာ သည် အွမ်မရ် နှင့် အွတ်စမါန် ၏ခေလာဖှသ် အချိန်တွင် ရှာမ် ၏မြို့စားဖြစ် သည်။ တတိယ ခလီဖှာ အသတ်ခံရပြီးနောက် အွတ်စမါန် ၏သွေးကြွေးကိုရယူရမည်ဟူသည့်ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အလီ နှင့်စစ်ခင်းခဲ့လေသည်၊ မာအ်ဝေယာ ၏အကြံပေးဝန်ကြီးဖြစ်သူ အမ်ရိုအားစ် က ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန် ကိုလှံထိပ် တင်ရန်အကြံပေးခဲ့သည် ဤနည်းလမ်းဖြင့် အလီ (အစ) ၏တပ်သားများစစ်တိုက်ခြင်းမှရပ်တန့်သွားအောင်လည်း လုပ်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ အနေအထားက ဟကမ်မီယသ် ဘက်ဦးတည်လာပြီဖြစ်၏ ဆိုလိုသည်မှာနှစ်ဖက်စလုံးမှပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးစီဆွေးနွေးရန်တွေဆုံရမည်ဖြစ်ပြီး တစ်ဦးမှာ အမ်ရိုအားစ် ဖြစ်ပြီး တစ်ဖက်မှ အဘူမူစာအရှ်အရီ ဖြစ်သည်။ ဆွေးနွေးမှု၏ရလဒ်မှာနှစ်ဖက်စလုံးမှခေါင်းဆောင်များကို ခေလာဖှသ် အရိုက်အရာမှဖယ်ရှားရမည်ဖြစ်သည် သို့ သော် အဘူမူစာအရှ်အရီ က အလီ(အစ) ကို ခေလာဖှသ် မှဖယ်ရှားလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းကြေညာပြီးချိန်တွင် အမ်ရို အားစ်က မာအ်ဝေယာ သည် ခလီဖှာ ဖြစ်သည်ဟုကြေညာလိုက်လေ၏။ ဤအခြေအနေမှာပင်ရပ်တန့်နေခဲ့ပြီး မာ အ်ဝေယာ သည် အလီ (အစ) သက်ရှိထင်ရှားရှိနေစဉ်ကာလတစ်လျှောက် ခလီဖှာ အဖြစ်ရပ်တည်နေလေတော့ သည်။ အလီ(အစ) ရှဟီးဒ် ဖြစ်ပြီးနောက်သားတော် ဟစန်(အစ) ခေလာဖှသ် အချိန်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ၊အေမာမ် (အစ) သည် မာအ်ဝေယာ နှင့်စစ်ခင်းရန်ဦးတည်ခဲ့သော်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်သာ ချုပ်ဆိုဖြစ်ခဲ့သည်။ဤနေ ရာတွင်အမြင်များတင်ပြမှုများကွာဟမှုရှိသည် တစ်မျိုးမှာ အေမာမ် ကိုယ်တိုင်ကစစ်ကိုမလိုလားဟုဆိုကာနောက် တစ်မျိုးမှာ အေမာမ် (အစ) သည်ရွေးချယ်စရာမရှိသဖြင့်ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်။ ပသို့ဆို စေစာချုပ်ပါအချက်တစ်ချက်မှာ မာအ်ဝေယာ သည်မိမိ၏နောက် ခေလာဖှသ် ကိုဆက်ခံမည့်သူရွေးချယ်သတ် မှတ်ခြင်းမပြုရဟုပါရှိသည်။ သို့သော်စာချုပ်ကိုချိုးဖောက်၍ မာအ်ဝေယာ သည်သူ၏သား ယဇီးဒ် ကို ခေလာဖှသ် အရိုက်အရာခန့်အပ်ခဲ့သည်။ မာအ်ဝေယာ သည်ဟိဂျ်ရီ ၆၀ ခုနှစ်တွင်သေခဲ့ပြီးသူ၏သား ယဇီးဒ် (မလ်အူန်) ခေ လာဖှသ် ကိုရယူခဲ့သည်။ ယဇီးဒ် ၏ ခေလာဖှသ် ကာလတွင်အလွန်ခါးသီးသောလုပ်ရပ်များကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည် ၊ ဟိုစိုင်နိဗ်နေအလီ(အစ) ကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်း ၊ မဒီနာရှိ မွတ်စလင်မ် တို့၏အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်များကို ဖျက်ဆီး သတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်း ၊ ကာအ်ဘာ ကျောင်းတော်ကိုတိုက်ခိုက်(မီးရှို့) ဖျက်ဆီးခြင်းများလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် နာမည်ဆိုးနှင့် ကျော်ကြားသော ခလီဖှာ (မလ်အူန်) ဖြစ်သည်။ .
မရ်ဝါနီယါးန် ဇိုဘိုင်ရီယါးန် မွခ်သားရ်[ပြင်ဆင်ရန်]
မွခ်သားရ် သည် ဟိဂျ်ရီ ၁ ခုနှစ်တွင် မဒီနာ မြို့၌မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူ၏ဖခင်သည် အီရန် ကိုအောင်နိုင်ခဲ့ချိန်ကပ ထမ ဆုံးဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားနိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး စစ်ပွဲတစ်ခုတွင်ကျဆုံးခဲ့သည်။ မွခ်သားရ် သည်ငယ်စဉ်က အလီ (အစ) ၏ နောက်လိုက်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးလေးဖြစ်သည့် စအီးဒ် ၏ထိန်းကျောင်းမှုအောက်တွင်ကြီးပြင်းခဲ့ရသည်။ စအီးဒ် သည် အလီ(အစ) ၏ခေလာဖှသ် ကာလတွင် မဒါယိန် မြို့စားအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်န် (အစ) အား ကူဖှာ သားတို့ကဖိတ်ကြားသောအခါအေမာမ်(အစ) သည်မိမိ၏ညီအစ်ကိုဝမ်းကွဲတော်သူ မွတ်စလင်မ်ဘင်န် အကီးလ် ကိုအခြေအနေအားလေ့လာရန်စေလွှတ်လိုက်ချိန်၌ အေမာမ် (အစ) အားကူညီရန်ပထမဆုံး ဘိုင်အသ် လုပ်ခဲ့သူမှာ မွခ်သားရ် ဖြစ်သည်။ ဟဇရသ်မွတ်စလင်မ် ရှဟီးဒ် ဖြစ်ပြီးနောက် မွခ်သားရ် ကို ဟဇရသ်မွတ်စလင်မ် အားကူညီသောပုဒ်မဖြင့်ထောင်ချခဲ့သည်၊ ရေဝါယသ် တစ်ခုအရ ကဲရ်ဘလာ စစ်ပွဲဖြစ်ချိန်၌ မွခ်သားရ် သည်ထောင် ထဲ၌ရှိနေခဲ့သည်။ မွခ်သားရ် သည်မိမိနှစ်မ အမျိုးသားနှင့်ပတ်သက်နေခြင်းကြောင့်ထောင်မှလွတ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဟေဂျာဇ် သို့သွား၍ အဗ်ဒွလ္လာ အိဗ်နေဇိုဘိုင်းရ် နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်၊ ထိုအခြေအနေမှာပင် အဟ်လေဘိုက်သ် နှင့်အ မြဲအဆက်အသွယ်ရှိခဲ့သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်န် (အစ) ၏ညီဖြစ်သူ မိုဟမ္မဒ်ဒိဗ်နေဟနဖှီယာ ထံအကြိမ်ပေါင်းမနည်း သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ မွခ်သားရ်သည် အေမာမ်စပ်ဂျားဒ်(အစ) ထံ ကဲရ်ဘလာ ၏သွေးကြွေးကိုရယူရန်တိုက် ခိုက်လက်စားချေခွင့်ပေးပါရန် ကြိမ်ဖန်များစွာခွင့်တောင်းသည့်စာများပေးပို့ခဲ့သည်။ သို့သော် အေမာမ် ကခွင့်မပြုခဲ့ ပါ ၊ ထို့နောက် မိုဟမ္မဒ်ဒိဗ်နေဟနဖှီယာ ထံသွားရောက်ခွင့်တောင်းပြန်သည်။ ဟနဖှီယာ ကလည်းတိုက်ရိုက်ခွင့်ပြူခဲ့ ခြင်းမျိုးမရှိခဲ့ပေ။ သုံးနှစ်ပြည့်ပြီးနောက် ကူဖှာ သို့ မိုဟမ္မဒ်ဒိဗ်နေဟနဖှီယာ ထံမှခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီဟူသည့်ကြွေးကျော် ချက်ဖြင့်ပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီး ရှီအာ များအားမိမိကို ဘိုင်အသ် လုပ်ရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်၊ဟနဖှီယာ ထံမှစာတစ်ဆောင် ကိုလည်းမိမိ၏နောက်လိုက်များအားပြသခဲ့သည်။ အချို့သော မွခ်သားရ် ၏နောက်လိုက်များကစာနှင့်ပတ်သက်ပြီး သံသယရှိခဲ့ပြီး စာကိုအတုဟုမှတ်ယူခဲ့ကြသည်။ သို့ပါ၍ မဒီနာ မြို့အေမာမ်စပ်ဂျာဒ် (အစ) ထံသို့သွားရောက်ခဲ့ကြ သည် ၊ ထိုအခါ အေမာမ်(အစ) က ကယာမ်-လက်စားချေရန်ထကြွမည့်ကိစ္စ- နှင့်ပတ်သက်ပြီးမိမိ၏ဦးရီးတော် ဟန ဖှီယာ ဆီသို့သာဆက်သွယ်ကြပါရန်မိန့်ကြားလိုက်လေသည်။ မွခ်သားရ် ၏နောက်လိုက်ထိုအုပ်စုသည် မကာ မြို့ သို့သွားရောက်ကြသောအခါ မိုဟမ္မဒ်ဒိဗ်နေဟနဖှီယာ က မွခ်သားရ် အားကူညီကြရန်မှာကြားလေသည်။ မွခ်သားရ်အိဗ်နေအဗူအိုဘိုင်ဒ်စကဖှီ သည် ကဲရ်ဘလာဝါကေယာ ၏သွေးကြွေးကိုရယူသည့်ကယာမ် များ၌စတ္တုထ မြောက်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။ ဟိဂျ်ရီ ၆၆ ခုနှစ်တွင် အိဗ်ရာဟီမ်အရှ်သဲရ် ၏အကူအညီဖြင့် ကူဖှာ ကိုသိမ်းပိုက်နိုင် ခဲ့သည်။ အိဗ်ရာဟီမ်အရှ်သဲရ် သည် မွခ်သားရ် စစ်တပ်တစ်ခုလုံး၏ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးသူ၏အမိန့်ဖြင့် အိုဘိုင်ဒွလ္လာ ကိုတိုက်ရန်လာခဲ့သည် ၊ အိုဘိုင်ဒွလ္လာဟိဗ်နေဇေယာဒ် သည်သူ၏ကြီးမားသောစစ်တပ်ဖြင့် စီးရီးယား မှ အီရတ် သို့ ချီတက်လာချိန်တွင် အရှ်သရ် သည် ကူဖှာမှထွက်ခွါလာခဲ့သည် ၊ မွခ်သားရ် ၏ရန်သူများကလည်းထိုအခြေအနေကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ကူဖှာ ကိုဝိုင်းလိုက်ကြသည် မွခ်သားရ် တော့အညံ့ခံရတော့မည်ဟုသွေးအေးနေကြချိန်တွင် အိ ဗ်ရာဟီမ်အရှ်သရ် သည် ကူဖှာ သို့ပြန်လှည့်လာပြီး ရန်သူများကိုချေမှုန်းနိုင်ခဲ့သည်။ အေမာမ်ဟိုစိုင်န် (အစ) ကိုစစ် ခင်းခဲ့သည့် ထောင်ပေါင်းများစွာသောရန်သူတို့သည် ကူဖှာ မြို့အတွင်းသေပွဲဝင်ခဲ့ရသည်။ ကဲရ်ဘလာတွင်ရှိခဲ့သည့် ရန်သူမှန်သမျှအသတ်ခံရပြီးကျန်အတော်များများကိုလည်းသုံ့ပန်းအဖြစ်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့သည်။ ရန်သူများကိုတိုက်ခိုက် ချေမှုန်းပြီးနောက် အရှ်သရ် သည် အိုဘိုင်ဒွလ္လာ အားတိုက်ခိုက်ရန်ပြန်ထွက်လာခဲ့သည် အိုဘိုင်ဒွလ္လာ သည်လည်း ကူဖှာ နားသို့အလွန်နီးကပ်စွာရောက်ရှိနေပြီဖြစ်၏ ကြီးမားသော ရှားမ်၏စစ်တပ်ကြီးကိုအနိုင်ရခဲ့ပြီးအိဗ်နေဇေယာဒ် ၏ခေါင်းကို မွခ်သားရ် အတွက်ပေးပို့ခဲ့သည်။ ရှာမ် စစ်တပ်ကြီးကိုအောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းသည် အီရတ် ကိုအုပ်ချုပ်သိမ်း ရန် မွခ်သားရ် အတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဟေဂျားဇ် မြို့စား အဗ်ဒွလ္လာဟိဗ်နေဇိုဘိုင်းရ် ကမိမိ အတွက် မွခ်သားရ် သည်ကြီးမားသောအန ္တရာယ်ဟုယုံကြည်ထားသည် သို့ပါ၍မိမိ၏ညီအစ်ကိုတော်သူ မွတ်စ်အဗ် အား ကူဖှာ ကိုတိုက်ခိုက်ရန်စေလွှတ်လိုက်သည်။ အရှ်သရ် သည် အိဗ်နေဇေယားဒ်အားကွပ်မျက်ပြီးနောက် မူဆိလ် တွင် မြို့စားအဖြစ်ရှိနေခဲ့ခြင်းကြောင့် မွခ်သားရ် ကိုကူညီဖို့ရာနှောင့်နှေးခဲ့သည် ၊ မွတ်စ်အဗ် သည် ကူဖှာ ကိုသိမ်း ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီး ကူဖှာ၏နန်းကိုရက်လေးဆယ်ကြာဝိုင်းရံခဲ့သည် နောက်ဆုံး မွခ်သားရ်သည်နောက်လိုက်ဗိုလ်ပါအနည်း ငယ်ဖြင့်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ရာအင်အားမမျှသဖြင့် မွခ်သားရ် အရေးနိမ့်ခဲ့ရသည်။
အဘ္ဘာစီ ဆိုသည်မှာတမန်တော်မြတ်(ဆွ)၏ဦးလေး အဘ္ဘာစ် မှဆင်းသက်လာသည့်မျိုးနွယ်ကိုခေါ်သည်၊အေမာမ် ဟိုစိုင်န်(အစ) ရှဟီးဒ် ဖြစ်ပြီးနောက် ရှီအာ များထဲမှအုပ်စုတစ်စုသည် မိုဟမ္မဒ်ဒိဗ်နေဟနဖှီယာ ကိုမိမိတို့၏အေမာမ် အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည် ၊ ထိုအုပ်စုကို ကိုင်စာနီယာ ဟုခေါ်သည်။ ဟနဖှီယာ ကွယ်လွန်ပြီးနောက်သူ၏သားဖြစ် သူ ဟာရှင်မ် ကိုအေမာမ် အဖြစ်ယုံကြည်ခဲ့ကြပြန်သည် ၊ ဟာရှင်မ် ကွယ်လွန်ပြီးနောက်အေမာမ် သတ်မှတ်ရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီးပဋိပက္ခများပေါ်ပေါက်ခဲ့ကာနောက်ဆုံးတွင် မိုဟမ္မဒ်ဒိဗ်နေအလီယိဗ်နေအဘာစ် အားအေမာမ် အဖြစ် ခန့်အပ်ကြေညာခဲ့ကြသည်။ ဤသို့ဖြင့် အဘာစီ တို့သည် ခေလာဖှသ် လောကထဲသို့ဝင်ရောက်လာခဲ့ကြသည်။ မဲရ်ဝါနီယါးန် ၏အုပ်ချုပ်ရေးအနှောင်းပိုင်းကာလကတည်းက အဘာစီ တို့သည်နေရာဒေသအသီးသီး၌မိမိတို့မျိုး နွယ်အတွက်ကောင်းစွာမဲစွယ်လှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည် အထူးသဖြင့် ခိုရာစါန် တွင် အရ်ရေသွာမင်န်အာလေ မိုဟမ္မဒ် ဆိုသည့် ကြွေးကျော်သံဖြင့်တောင့်တင်းခိုင်မာသောအင်အားစုကြီးတစ်စုကို မရ်ဝါနီယါးန် နှင့်ရှင်ပြိုင်နိုင်ရန် စုစည်းနိုင်ခဲ့သည်။ ၁၃၂ ခုနှစ်တွင် မရ်ဝါနီယါးန် တို့၏အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကျဆုံးခဲ့ပြီး စဖှာဟ် သည်ပထမဆုံး အဘာစီ ခလီဖှာ အဖြစ်နေရာယူခဲ့သည်။ ၎င်း၏နောက်ပိုင်းတွင် မန်စူရ် မှခေလာဖှသ် ကိုရယူခဲ့သည် သူသည်အင် ကြီးသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီးပုန်ကန်ထကြွမှုများကိုကောင်းစွာနှိမ်နင်းနိုင်ခဲ့သည်။ အလဝီ များကလည်းအလွန်လျင်မြန်စွာ တော်လှန်ပုန်ကန်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မန်စူရ် သည်နန်းစိုက်ရာမြို့တော်ကို ဘဂ်ဒါဒ် သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ဟာရူန်ရရှီးဒ် သည်အဘာစီ ခလီဖှာ များအကြားအင်အားအကြီးမားဆုံး ခလီဖှာ ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ခေတ်ကာလတွင် အဘာစီ မင်းဆက်အုပ်ချုပ်ရေးသည်အထွတ်အထိပ်သို့ရောက်ခဲ့သည်၊ သို့သော် ဟာရူန် သေပြီးနောက်ဒေသအသီး သီး၌ တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်ရေးများပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ပမာအားဖြင့် မာအ်မူန် ၏ခေလာဖှသ် ကာလတွင် ခိုရာစာန် ၌ သူ့သားဖြစ်သူ၏ သွာဟီရ်ရီယားန် အုပ်ချုပ်ရေးပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ အဘာစီ တို့သည်နှစ်ငါးရာကျော် စိုးစံခဲ့ပြီး ၎င်း တို့၏အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတွင်အနိမ့်အမြင့်များရှိခဲ့သည် ၊ ၁၂ ပါးအေမာမ်ကိုလက်ခံသောရှီအာများလည်းဖြစ်သည့် အာလေဘိုဝိုင်း ၏ခေတ်တွင်ထိန်းချုပ်မှုများအကြားရှိနေခဲ့ပြီးအားနည်းခဲ့သည် ၊ ဟာရူန်ရရှီးဒ် ၏ခေတ်တွင်အုပ်ချုပ် ရေးအာဏာသည်အလွန်အားကောင်းခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး ၆၅၆ ခုနှစ်တွင် မဂိုလ် များက ဘဂ်ဒါဒ် ကိုချီတက်တိုက် ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ရာ အဘာစီ မင်းဆက်တို့၏ ခေလာဖှသ် လည်းအဆုံးသတ်ခဲ့ရသည်။ .
အစ္စလာမ် ပြန့်ပွားခဲ့ခြင်း နှင့် အစ္စလာမ့်အုပ်ချုပ်ရေးများ[ပြင်ဆင်ရန်]
ခလီဖှာ များ၏ခေတ်ကာလ မိုဟမ္မဒ်(ဆွ) လက်ထက် အစ္စလာမ် ပြန့်ပွားမှု ၆၂၂-၆၃၂ ခိုလဖှာယေရာရှေဒီးန် လက်ထက် အစ္စလာမ် ပြန့်ပွားမှု ၆၃၂-၆၆၁ ခိုလဖှာယေ အိုမိုင်ယာ လက်ထက် အစ္စလာမ် ပြန့်ပွားမှု ၆၆၁-၇၅၀
အစ္စလာမ့်တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ) သည် မကာမှ မဒီနာ သို့ ဟိဂျ်ရသ် ပြုခြင်းဖြင့် အစ္စလာမ့်နိုင်ငံရေးကိုအုပ်မြစ် ချနိုင်ခဲ့သည်။ မိမိ၏ရန်သူများမှခုခံကာကွယ်ခြင်း အထူးသဖြင့် မကာဟ် မြို့၏ရန်သူများရှေ့တွင်မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ခဲ့သည်။ အစ္စလာမ် ၏ပညတ်တော်များကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန် အတွက်စစ်ပွဲများလည်းဆင်နွဲခဲ့ရ သည်၊ မကာဟ် သားတို့နှင့် ဟိုဒိုင်ဗီယာငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်၏နောက်ဆက်တွဲတွင် မကာဟ် မြို့အားသွေးစွန်းခြင်းမ ရှိဘဲအောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက်အိမ်နီးချင်း အင်ပါယာ များသို့စာများပေးပို့ပြီးအစ္စလာမ် သို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ တမန် တော်မြတ်(ဆွ) ဝဖှားသ် ဖြစ်ပြီးနောက်ပထမ ခလီဖှာ သည် တမန်တော်ကြွေးကျော်မှုများနှင့်ပတ်သက် ၍စစ်ပွဲများခင်းခဲ့သည်။ သူ၏လက်ထက်တွင် ရောမ၊စီးရီးယားကိုအောင်နိုင်ခြင်းနှင့် ပါလစ်္စတိုင်း ကိုလည်းမွတ်စလင် တို့လက်ဝယ်သိမ်းပိုက်နိုင်မှုများရှိခဲ့သည်။ ဒုတိယ ခလီဖှာ လက်ထက်တွင် ဒမရှ်က် နှင့် ယဲရ်မူက် ကိုအောင်နိုင်ခဲ့ သည်။ ဟဲရ်ကီလ် သည် ဒမရှ်က် ကိုလွှတ်၍ အစ္စသာန်ဘူးလ် သို့တိမ်းရှောင်ထွက်ပြေးခဲ့သည် ၊ တဖြေးဖြေးနှင့် ရှာမ် တစ်ခုလုံး မွတ်စလင်မ် တို့လက်ဝယ်ကျရောက်လာခဲ့သည်။ ဘိုက်သွလ်မိုကဒပ်္စ သည်ထိုအချိန်က (အီလီယာအ်) အမည်ရှိခဲ့သည်၊ အွမ်မရ် သည် ရှာမ် သို့ခရီးထွက်ချိန် မစီးဟီးအကြီးအကဲခေါင်းဆောင်မှ လွှဲအပ်ပေးခဲ့သည်။ ထို့ နောက် အွမ်မရ် သည် အီဂျိဘ် နှင့် အာဖရီးကားမြောက်ပိုင်းဘက်သို့နယ်ချဲ့ခဲ့သည်။ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)လက် ထက်တွင်အနောက် အရဗ် ကျွန်းစွယ်တစ်ခုလုံး မွတ်စလင်မ် တို့လက်ဝယ်ကျရောက်ခဲ့သည်။ အဘူဘက်ရ် ခေတ် တွင် ကျွန်းစွယ်တစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်။ အွမ်မရ် ၏လက်ထက်တွင် မာဝရာအွန်နဟ်ရ် မြောက်ပိုင်းပင်လယ် အီရန်၊ အီရတ်၊ စီးရီးယား၊ အီဂျိဘ်၊ လီဘီး တို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်။ အွတ်စမါန် ၏ခေတ်တွင် အာရာမြစ်ငယ် ကာစဘီးန် မြစ်ကမ်းတစ်လျှောက်မှ ပင်လယ်နက် အထိ၊အာစဝါန် အနောက်ပိုင်း၊လီဘီး ၏ကျယ်ဝန်းသောမြစ်ကမ်း ဒေသများကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်။ အစ္စလာမ်မစ် အင်ပါယာသည်အရှေ့ဘက်ခြမ်းတွင် စီးစ်သားန် နှင့် ခိုရာစါန် အထိ၊ အီရန် အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင် အာဇရ်ဘိုင်ဂျာန်နှင့်အရ်မနစ်္စသာန် အပါအဝင်၊ အနောက်ပိုင်းတွင် ရှာမားသ် ဟုအမည်တွင်သော ဆိုလိုသည်မှာ ဂျော်ဒန်၊ စီးရီးယား၊ ပါလစ်္စတိုင်း၊ လက်ဘနွန်၊ အီဂျိဘ် အထိရှိခဲ့သည်။ ဤနေရာဒေသ များသည်အရင်က မြောက်ပိုင်းရောမ တို့အောက်တွင်ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းနေရာဒေသရှိလူတို့သည်အချို့မှာ အရဗ် ဖြစ်ပြီးအချို့မှာ ရောမလူမျိုးများဖြစ်ကြသည်။ အစ္စလာမ် စိုးမိုးပြီးနောက်ပိုင်းထိုနေရာဒေသများ၌ အရဗ်ယဉ်ကျေးမှုများလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ အိုမိုင်ယာ တို့၏ခေတ်တွင်အာဖရီးကားမြောက်ပိုင်းတွင်အနောက်ဘက်အထိ အန်ဒလီးစ်ကိုပါ သိမ်းပိုက်စိုးမိုးနိုင်ခဲသည်။.
ယီမင် နှင့် ဟေဂျားဇ်[ပြင်ဆင်ရန်]
အီဂျိဘ် နှင့် စီးရီးယား[ပြင်ဆင်ရန်]
အဘူအိုဘိုင်ဒါဂျရ်ရာဟ် သည်ခလီဖှာ ၏စေလွှတ်မှုဖြင့် စီးရီးယား ကိုအောင်နိုင်ခဲ့သည်။ အဘူဘက်ရ် သည်ကာ လအတန်ကြာပြီးနောက် ခါလိဒ်ဒိဗ်နေဝလီးဒ် ကို အဘူစိုဖှီယါန် သူ၏သာများဖြစ်သော ယဇီးဒ် နှင့် မအာဝေယာ၊ဆွ ဟာဘာ အချို့တို့နှင့်အတူအကူအညီပေးရန်အတွက်စေလွှတ်လိုက်သည်။ နောက်ဆုံး ၅၁၃ ခုနှစ်တွင် ယရ်မူက် စစ် ပွဲ၌ ရောမ စစ်သားများ မွတ်စလင်မ် တို့အားစစ်ရှုံးပြီး ရောမ ၏စည်ကားသောမြို့ရိုးတံခါးကြီးများ မွတ်စလင်မ် တို့ အတွက်ပွင့်ခဲ့သည်။ အွမ်မရ် ၏ခေလာဖှသ် နောက်ဆုံးအချိန်တွင် အမ်ရိုအားစ် ၏ဦးဆောင်မှုဖြင့် အီဂျိဘ် ကိုသိမ်း ပိုက်နိုင်ခဲ့သည်။ .
အစ္စလာမ် လွှမ်းမိုးလာပြီးနောက် အီရန်[ပြင်ဆင်ရန်]
↑ سایت مؤسسه گفتگوی ادیان။ 28 January 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 21 March 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ دائرةالمعارف اسلام، مقالهٔ ایمان။ 10 February 2007 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 21 March 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ کتابخانه طهور، وضعیت مسلمانان پیش از هجرت။4January 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 21 March 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အစ္စလာမ်_သမိုင်း&oldid=719249" မှ ရယူရန်